ikhaya » I-Archives Tag: i-multiscreen
Archives Tag: Ezininzi
I-QYOU ihamba ngokuphindaphindiweyo komhlaba kwiinyanga ezili-6 ukufikelela kubaphulaphuli be-300M +
I-QYOU Media (TSXV: I-OYT OTC: QYOUF), i-curator ehamba phambili yevidiyo ye-premium 'ye-web' ye-distribution ye-multiscreen, namhlanje ivakalise ukuba iifom zeprogram zayo ngoku zifikelele kubaphulaphuli abanokubakhokheli abangaphezu kwezigidi ze-300 emhlabeni jikelele. Oku kubonisa ukunyuka okuphindwe kathathu kokusabalalisa ukufikelela kwiinyanga ezintandathu, kukhutshwa ngokubambisana ngokutsha kwe-Asia, Afrika, iYurophu kunye neNyakatho Melika. Ubuhlakani obutsha ...
I-Paywizard kunye ne-Massive Interactive iqabane lokuqhuba i-UX phambi kokuphela komsebenzi kwisigqibo ngasinye somthengi
Paywizard, ukuthenga, billing nomthengi ulawulo ulwalamano (CRM) lwengcali, oye namhlanje wabhengeza ubambiswano olutsha enobuchule Kuku Interactive, ziingcali amava umsebenzisi ekujoliswe iinkonzo multiscreen yevidiyo. Intsebenziswano iya kwenza abaqhubi bakwazi ukusebenzisa ulwazi olutyebileyo lweenkcukacha kunye neengxelo zokuhlaziya ukulungiselela ababhalisayo ngokugqithiseleyo kwaye bahambelane ne-UI kwiinqhosha ezisibhozo 'Izigqibo zoMsebenzi' ekuhambeni komthengi; ...
I-Alpha Networks, i-Spideo, kunye ne-Wyplay iya kubonisa i-Frog Premium, isiXhosa seMultiscreen Isixazululo sokuCala ukuPhela kwi-2017 NAB Bonisa
I-BRUSSELS, PARIS, MARSEILLE-Aprili 11, i-2017-Alpha Networks, inkampani ye-teknoloji ye-TV ehlawulwayo kwi-software yokugqibela; I-Spideo, isizukulwana esilandelayo sesinjini somcebisi; Kunye ne-Wyplay, umdali wezisombululo ze-software zokuqhuba abaqhubi bee-TV-ntlawulo, namhlanje bavakalisa ubambiswano obanzi apho ubuchwepheshe babo behlanganiswe ukuhambisa i-Frog Premium, umveliso weTV wokugqibela, ukunika amava omsebenzisi onomdla kwi ...